Madaxweyne Farmaajo oo xulufo kale u raadinaya dagaalka Al shabaab – Somali Top News
Madaxweyne Farmaajo oo xulufo kale u raadinaya dagaalka Al shabaab
July 22, 2019 July 22, 2019 Somali Top News	0 Comments
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay xarunta madaxtooyada casho sharaf ugu sameeyay wafdigga uu hoggaaminayo madaxweynihii hore ee Koonfur Africa Thabo Mbeki labadii maalmood ee la soo dhaafay ku sugnaa Muqdisho
“Dagaalka aan kula jirno argagixisada ma ahan mid ku kooban Soomaaliya, waa dagaal u yaalla dhammaan dalalka Gobolka.
”Wax ka qabashada Al-shabaab waxaa ay u baahan tahay jawaab heer Gobol ah iyo aragti mideysan oo aan ka yeelanno xaqiijinta amniga guud ee Gobolka.” ayuu yiri madaxweyne Farmaajo
Sidoo kale, Madaxweyne Famaajo ayaa sheegay in doorka dowladda Soomaaliya ay ka qaadanayso arrimaha Geeska Afrika iyo goobta istaraatiijiga ah ee uu dhaco dalkeennu ay horseedayso in aan xarun weyn u noqonno diblomaasiyadda iyo ganacsiga gobolka.
“Sharaf ayeey ii tahay in aan Muqdisho imaado 45 sanno ka dib. Waxaan halkan joogay 1974, xilligaas Soomaalidu waxa ay ahaayeen dad mideysan iyo dal xoog leh.”
← President Farmajo discusses with Former President Mbeki on regional integration
Xaliimo Yareey oo ka hadashay waqti kororsi la sheegay iney sameyn doonto Dowladda Federalka →
Gudoomiyaha dagmada Buulo-Buurte oo ka hor yimid xilka qaadis uu ku sameeyay maamulka Hirshabelle
Madaxweyne Farmaajo oo sanadkii labaad ka baaqanaya shirka Qaramada Midoobay ee New York